दुर्लभ पेन्गुइन जो आन्ध्र महासागरबाट तीन हजार किलोमिटर हिँडेर न्युजिल्यान्ड पुग्यो « Etajakhabar
काठमाडौ । न्युजिल्यान्डमा एउटा पेन्गुइन आफ्नो वास्तविक वासस्थानबाट तीन हजार किलोमिटर टाढा हिँडेको छ । स्थानीयले माया गरेर पिंगु नाम दिएको एडेली पेन्गुइन न्युजिल्यान्डको समुद्री तटमा फेला परेको हो । सो पेन्गुइन आन्ध्र महासागरबाट न्युजिल्यान्ड पुगेको विश्वास गरिएको छ । यसलाई वैज्ञानिकहरूले विश्वकै दुर्लभ र रोचक घटना बताएका छन् ।
‘सुरूमा देख्दा मैले त्यसलाई एउटा नरम खेलौना जस्तो माने । अकस्मात त्यसले टाउको हल्लायो । त्यसपछि त्यो साँच्चीकै जीवित प्राणी जस्तो लाग्यो । ’ उनले भने । सिंहले फेसबुक पेजमा पोस्ट गरेको एउटा भिडियोमा पेन्गुइन नितान्तै एक्लो र हराएकोजस्तो देखिन्छ । ‘उ एक घन्टासम्म चलेन । उ निकै थकित देखिन्थ्यो ।’ सिंहले लेखेका छन् ।
‘निर्दोष चरा बिरालो, कुकुर वा अन्य कुनै प्राणीको शिकार बन्छ की भन्ने डरले त्यसलाई कुरेरै बसिरहे,’ उनले भने । केही समयपछि एक उद्दारकर्ता आए । उनी थिए थोमस स्ट्राके । थोमसले विगत १० वर्षदेखि न्युजिल्यान्डको दक्षिणी टापुमा पेन्गुइनलाई पुनसर््थापना गर्दै आएका थिए ।
त्यस दुर्लभ चरालाई बैंकस प्रायद्धीपमा चाँडै नै छोडिने भएको छ । त्यहाँ कुकुर र बिरालो हुँदैन् । समुद्री तटमा एडेली प्रजातिको पेन्गुइन फेला परेको न्युजिल्यान्डको इतिहासमै यो तेस्रो घटना हो । यसअघि न्युजिल्यान्डका दुई ओटा अलग अलग तटमा सन् १९६२ र सन् १९६३ मा यस्तै दुर्लभ पेन्गुइन फेला परेका थिए ।
एडेली पेन्गुइन भेटिनु निकै दुलर्भ घटना भएको र भविष्यमा पनि यस्ता पक्षी देखिएमा यसले खतरा संकेत गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘वार्षिक रुपमा एडेली पेन्गुइन यसैगरी देखिएपछि समुद्रमा केही गडबढी भएको रैछ भनेर बुझ्नु पर्छ,’ ओटागो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फिलिप सेडन भन्छन् ।
पेन्गुइन समुद्रबाट किन बाहिर आउछन् रु तिनिहरू कहाँ जान्छन् ? के गर्छन् ? र उनीहरूको जनसंख्या कति छ रु जस्ता प्रश्नहरूको अध्ययन आवश्यक भएको उनको भनाई छ । पेन्गुइनले सामुद्र्रिक पर्यावरणबारे पनि धेरै कुरा बताउने उनको भनाइ छ ।